Amazing Omdala Gameplay Kunye Patreon Porn Imidlalo
Bale mihla yeteknoloji kwaye ngokukhawuleza kwi-intanethi bazise a revolution yethu yonke imihla ubomi. Plenty kuthi andinaku qinisekisa kokudlula epheleleyo usuku ngaphandle kokuya kwi-intanethi ukukhangela phezulu ngomhla ezahlukeneyo izinto. Ukususela ndlela siya kwenza imicimbi njani sibe ekubeni fun, ke zonke dramatically ezahlukeneyo kunokuba kwakunjalo nje ezimbalwa decades eyadlulayo. Zonke ukuba, enyanisweni, lotshintsho influenced kunye yehlabathi ka-mainstream imidlalo yevidiyo kwaye ihlabathi ka-omdala pleasures. Zonke ukuba zidibene kwaziswa malunga a emangalisayo nto ngokuba Patreon omdala imidlalo.
Xa ke iza XXX imidlalo, izinto weren ukuba ujonge oqaqambileyo nje eminyaka emva. Ukwenza umdlalo akusebenzi ukuba kulula njengokuba kuthatha plenty kwexesha, izixhobo zokusebenza, kwaye manpower. Ukuba ukuqwalasela okuthethwayo ukuba kuphela omkhulu iinkampani ayikwazi ukwenza, wabe, kwaye ngalo into kukunceda kakhulu ukudlala. Ngokongezelelweyo, abo mainstream publishers wouldn ukuba ngenene yiya phantsi rabbit umngxuma, ukwenza zonke iintlobo ezininzi ezonakeleyo kinky amaphawu ukuba kuya kuba nzima ukuba abathengi ukuba mainstream ababukeli bomdlalo bangene. Kwakukho, kwaye uzole ngabo, plenty ka-imigaqo kwaye imigaqo xa oko iza izinto ezinjalo., Nkqu namhlanje, awunokwazi silindele a triple-isihloko ukusuka famous studio ukuba ibe porn umdlalo. Ngokuqinisekileyo, zisenokuba a ngesondo icandelo lomboniso apha naphaya, kodwa ke, zonke njengoko softcore njengokuba kubhaliwe sixhobo.
Patreon omdala imidlalo, kwesinye isandla, ingaba endeavors ka-encinane, elizimeleyo njengesiqhelo okanye nkqu abantu abo utilize bale mihla tech ukwenza incredible izinto. Njengoko hardware kwaye software waba ukubonelelwa potent, thina anayithathela yafikelela incopho apho ke kunokwenzeka omnye guy ukuyenza yonke. Ukuba kuvunyelwe iqelana ka-horny abazobi kwaye ababhekisi phambili ukuzisa zabo fantasies ebomini. Patreon, ngokulandelelanayo, wanika nabo malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-gaining imali yabo amaphulo kwaye yiyo njani silifumene a itoni enye amazing porn imidlalo.
Patreon Omdala Imidlalo kwimali Unyuko
Kukho sele a itoni enye yezi imidlalo zonke kwi internet. Mzuzu kokuba kuqaliswe esiza ngaphandle kwaye ndabona abantu babo kwezo meko, yonke into waqala lokukhula exponentially. Imaginative creators zonke phezu kwehlabathi figured ngaphandle babenako ukusebenzisa izakhono zabo kwaye imdaka iingqondo ukwenza into ethile ngexesha ngaxeshanye ekubeni nako ukwenza ophilayo okanye, ubuncinane, ukwahlula hluleka imali kwi-nkqubo. Kwelinye icala, gamers belambile kuba XXX intshukumo baba ngaphezu ninoyolo ukuba negalelo elihle sizathu, ingakumbi ukwazi baya kuza kuba rewarded nge thrilling amava kwi end.
Patreon omdala imidlalo ziindleko imveliso ye imeko apho wonke icala uphumelele. Kwaye, xa sikhubeke phezu into efana ukuba, ke kuphela yendalo kuba izinto ukuya phambili. Ngakumbi creators abaziwayo, ngakumbi abalandeli agcina appearing, kwaye, kamsinya ngokwaneleyo, nkqu small-ixesha, porn umdlalo ababhekisi phambili baba usenza okulungileyo imali. Kodwa, apho makhulu iinkampani ingaba qala strictly ujonge e a inzuzo xa neglecting umgangatho, indie ababhekisi phambili baba usebenzisa zonke ukuba imali ukufumana ngcono izixhobo kwaye anike nangakumbi umgangatho wabo olandelayo. Emva zonke, baya ungafuni ukumisa kuphulukana nayo ke bonke.
Omnye babecocekile nto malunga yonke inkqubo waba nako ka-ababukeli bomdlalo bangene ukuthatha inxalenye kwi-nkqubo kwendalo. Patreon omdala imidlalo aren khange made ngokukhawuleza kwaye ipapashwe ngoko nangoko. Endaweni yoko, umenzi kuthatha ixesha kwaye izithuba rhoqo uhlaziyo zabo abalandeli, kuqinisekiswe intsingiselo umsinga ka-mali ngexesha ukunikezela i-patrons kunye phambi kwexesha ukufikelela kwaye elithetha. Ngalo ndlela, abantu bayakwazi ukudlala umdlalo ekunene kwi-get-hamba, amava izahluko omnye ngexesha, kwaye uyakuthanda kuyo njenge-TV uphawu. Hayi nje ukuba, kodwa babenako nika emva iintlangaaniso criticism kwaye nkqu tshintsha yobomi umdlalo.
A ngezixhobo ezahlukeneyo Iimveliso Ukukhetha Ukusuka
Ngenyanga umrhumo ukuba umntu ke Patreon akuthethi ukuba iindleko kakhulu. Ngesiqhelo, kunokwenzeka njengoko low njengokuba buck okanye ezimbini. Oku kuthetha ukuba ufumana ukuze bonwabele nantoni na ofuna kuba eliphantsi ngenyanga kwexabiso. Imidlalo kuza nge babecocekile inkcazelo ukuba uxelela yonke into a enokwenzeka gamer ifuna ukwazi nkqu phambi ukusayina phezulu. Loo nto yenza competitive-bume apho wonke umenzi fights hlasi wonke umntu ongomnye ke ingqalelo kwaye sisiyaphambili ngakumbi. I-simplicity lomgaqo-nkqubo uqinisekisa massive quantity oko kuthetha ukuba kukho ezininzi ezahluka-hlukileyo Patreon omdala imidlalo ukukhetha ukusuka., Kwaye, nkqu nokuba plenty ezi nkampani ngxi ngowe-uphuhliso, kokukhona ngabo sele ugqibile, phezulu kwi-intanethi, kwaye ulungile kuba idlalwe.
I-ngezixhobo ezahlukeneyo iza kunye kwi-visual, kwaye gameplay kwicandelo. Akunjalo ukususela ukuqala, ungaya kuba 3D umdlalo okanye ngaphezulu cartoonish omnye. Nokuba yakho oyikhethileyo, silindele nto kodwa impeccable visuals. 3D KDE inikeza unprecedented realism kwaye girls uza kuyibona kwaye fuck kwezi amaphawu jonga nkqu ngcono kunokuba yokwenene ebomini amantshontsho. Ngaba ukhe ubene kwi mkhulu okanye mncinane tits, blondes, redheads, brunettes, teens, okanye MILFs, baya kuba kuyo bonke. Kwaye, kuba lovers ka-hentai okanye omdala cartoons, kukho nje njengoko abaninzi Patreon omdala imidlalo ukuba yanelisa zabo imdaka iimfuno.
Xa ke iza gameplay, kukho kanjalo kakhulu bedlule. Ngaba ukhe ubene a izakhono gamer ngubani isoloko ikhangela umngeni, okanye umntu lowo ufuna ulwimilanguage wabo omdala adventures phezulu, ezi amaphawu siyifumene zonke. Omnye makhulu inyaniso nowadays ngu-visual novels apho kufuneka athabathe ulawulo engundoqo, uphawu kwaye lawula ngokusebenzisa ibali xa usenza nemigaqo yokusebenzisa imichiza kwaye tailoring i-adventure ngokunxulumene iimfuno zakho. Kodwa kukho akukho nokungabikho RPG, FPS, adventure amagama eencwadi, kwaye ngaphezulu.
I-Ngonaphakade-Lokukhula Yezixhobo ka-Imidlalo Ukukhetha Ukusuka
Njengoko kukhankanywe, Patreon omdala imidlalo ngabo bonke nomsindo nowadays. Kwaye nangona kukho enkulu isixa zonke phezu web, ukubonelelwa gcina popping phezulu ekhohlo ne ekunene. Ngu snowballing ukusebenza apho wonke umntu nge-i-unye ukunika ngayo a esifutshane, kodwa kuphela eyona bahlala. Ukuba iqinisekisa kunye umgangatho kwaye kobuninzi bamanzi. Kunye ngoko ke, abaninzi imidlalo kwi-circulation, ke absolutely irrelevant yintoni tickles yakho entle. Nisolko babotshelelwe ukufumana into eza kwenza igazi lenu boil kwaye ke ukudlala ke ukuba akukho kunye. Wena musa nkqu kufuneka i-PC njengoko unga ukudlala kwi-smartphone.